Sidee Loogu Qoraa Faallooyinka Qoraalada 'Instagram'? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sida loo qoro faallooyinka qoraallada Instagram?
Waxaa laga yaabaa 6, 2021 0 comments 334
Shabakadaha bulshada, sida magaceeda ka muuqata, waa nidaamka dhexgalka internetka, inaad la sameysid xiriiro bulsheed asxaabtaada iyo qoyskaaga, iyo dabcan, kumanaan kun oo qof oo maalin walba gala barnaamijyada kaladuwan.
Xiriirradaan waxaa lagu fuliyaa qoraallo qoraallo ah, sawirro, gifs, iyo fiidiyowyo. Halkaasoo dadku siyaabo kala duwan isugu muujin karaan. Sida oo kale, tusaale ahaan, adoo adeegsanaya emojisyada xiisaha leh ee lagu qaabeeyey meheradaha ama si fudud loo soo mariyo faallooyinka.
Adoo adeegsanaya faallooyinkan, isticmaaleyaashu xitaa waxay bilaabi karaan wadahadallo kulul iyagoo muujinaya aragtiyo kala duwan oo ku saabsan wadahadalka.. Haddii aadan weli garanayn sida looga faalloodo qoraallada Instagram, raac tallaabooyinka aan ku tusi doono xagga hoose.
Halkee ayaad uga faalloon kartaa barta Instagram?
Si aad ugu qorto faallooyin ku saabsan qoraallada kuwa raacsan iyo kuwa adiga kuu gaar ah, kaliya raac nidaamka aad ka heli doonto halkan:
Ka soo gal barta 'Instagram' barnaamijkaaga ama mashiinka raadinta ee aad dooratay, haddii aad gasho nooca webka.
Waxaad arki doontaa is-dhexgalka caadiga ah ee 'Instagram' oo inta badan ka kooban khadka waqtiga iyadoo la daabacayo kuwa raacsan, marka lagu daro dhammaan astaamaha loo heli karo shaqooyinka kala duwan ee ay Instagram ku siiso
Wareeg khadka waqtiga illaa aad ka hesho daabicis aad rabto inaad ku qorto faallo. Waxaad arki kartaa in qeybta hoose ee daabacaadda ay ka muuqdaan astaamo taxane ah, iyo sidoo kale macluumaad kale sida dadka jeclaa daabacaadda iyo tirada faallooyinka lagu sameeyay daabacaadda.
Badanaa faallooyinka ugu horreeya ayaa soo baxa, inta hartayna waa qarsoon yihiin. Sida nuqulka intiisa kale ee daabacaadda
Waa inaad ku cadaadisaa astaanta qaab daruur wada hadal ah. Isla markiiba ka dib, interface wuxuu ku tusi doonaa sanduuqa qorista faallooyinka ee shaashadda hoose.
Waxaad awoodi doontaa inaad qorto qoraalka oo sanduuqa dushiisa waxaad arki doontaa emojis kala duwan oo loo heli karo qoritaanka faallooyinka.
Markaad qorto faallooyinka, waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad riixdo ereyga "in la dhajiyo", si faalku u muuqdo mid ka muuqda daabacaadda.
Instagram ayaa kuu oggolaaneysa inaad ka faallooto faallo kale oo lagu soo qoro:
Soo hel faallooyinka aad rabto inaad ka dhigato a faallo.
Markaad joogtid, waxaad awoodi doontaa inaad u fiirsato inay jiraan dhowr talaabo oo aad ku sameyn karto faallo. Waad bixin kartaa Waan jeclahay " faallooyinka ama waad siin kartaa a "jawaab".
Riix xulashada "jawaab". Markaad sameyso, waxaad arki doontaa interface-ka si aad u qorto faallo. Baarka wax lagu qoro waxaad ku arki doontaa in faallooyinka ay ka bilaaban doonaan magaca isticmaale ee qofka aad rabto inaad faallo ka bixiso, oo uu ka horeeyo calaamadee.
Tani waxay muujineysaa in jawaabta faallooyinka lala hadlayo qofkaas, isla marka aad sameysoba, waxay heli doonaan ogeysiis jawaab celin ah.
U qor jawaabta sida aad u qori lahayd faallo qoraal ama emojis, ugu dambaynna taabo "daabac".
1 Halkee ayaad uga faalloon kartaa barta Instagram?
2 Qor faalladaada
3 Faallooyinka faallooyinka
Sideen u soo dejisan karaa durdurrada 'Twitch streams'?
Sida loo kiciyo ama loo joojiyo otoplay-ka YouTube-ka